Iidlo zeer roe
Inyama ye-roe inyama phakathi kwabazingeli baseSiberia ibaluleke gqitha. Ithenda kakhulu kwaye ayifani nokungafani ne-maral, inyamazane okanye inyama ye-moose, iqulethe i-fat refractory fat, i-roe inyama izitya zingcono.
Intliziyo, isibindi, iintso ze-roe deer zibaluleke kakhulu. Ngenxa yokuba baqokelela izinto ezifunekayo zomzimba. Umgangatho wenyama ye-pora ixhomekeke xa ichitshiweyo, ukususela kwixesha lonyaka, nakwizinto ezikhoyo. Ukulungiselela izitya kwi-meat meat deer kufuneka ufunde amaqhinga amancinci aza kwenza izitya ezivela kwi-roe deer ezihle kakhulu.
I-roe deer iphekwe kwi-sauce e-creamy-cranberry
i-fillet ye-roe deer - 300g.
amaqanda amasha 50 g,
ibhakoni - 40g.,
ioli yemifuno - 20 g,
ushizi - 22g.,
i-cranberries - 40 g,
isaladi - iminyaka engama-45
i-anyan - 20g.,
I-sirloin ye-roe deer kufuneka ilahlwe ukwenzela ukuba i-pancake ene-0.5 cm ifumaneke, i-pepper, ityuwa. I-bacon, anyanisi, ama-champignon amancinci anqunyulwa ngamacwecwe amancinci - i-fry kwioli yeoli (inokuthi ithathe indawo kunye naluphi na i-oyile yemifuno), kwaye ubeke inyama. Phezulu kunye noshizi otyityiweyo, ongenanto ekhanyayo (Edamer, Gouda, njl.). I-rosemary esicatshulwa ngokutsha -fafaza phezu kweshizi. Gcwalisa inyama kwisiqulatho, ugqunywe ngaphakathi, xhuma nge-toothpick okanye sibophe intambo. Siyasasaza kwi-pan yokucima kunye nomthunzi phantsi kwaye ufune ukunqanda ukususela kumacala onke kude kube yinto enqabileyo. Ijusi ekhutshwe ngexesha lokutshiza inyama ayithelwanga, iluncedo kwi-sauce. Emva koko ufake efubheni bese ubhaka ama-5-7. Ukugqitywa kweqonga kwinqanaba, phezulu kunye ne-sauce, ukukhonza kushushu kwitafile.
Kwipeni yokucoca kunye nejusi yenyama ehlalayo, uthele i-33% yekhilimu uze ungeze i-cranberries, ubilise imizuzu engama-3, yongeza ityuwa ukunambitha uze ubilise enye imizuzu emi-2. I-sauce ekulungeleyo isasazeka kwisitya, ihlotshwe ngamagqabi e-rosemary, anyanisi eluhlaza, i-lettuce kunye neerranberries. Etafileni sisebenzela kwisitya esisodwa. Le sauce iya kuhambelana nayiphi na isidlo esenziwe kwi-dae deer.
Ukutya inyama kunye nokuhlobisa
inyama ye-roe deer evela ngasemva-1 kg.
amanqatha atshisa i-bacon - 500 gr.,
iargargar (ibhotela) - 2 tbsp. l.,
i-anyanisi, izaqathe (i-karotel eyahlukeneyo) - 1 pc.,
ukhilimu - ¼ ilitha. ukhilimu.
Umhluzi wenyama ogqityiweyo ukusuka emanzini amadube - 1.8 ilitha.,
amathanga amathanga - ½ amathanga,
i-currant jelly - 2 tbsp. l., pepper, ityuwa,
Kubalulekile ukunqumla inyama ukusuka emhlane we-roe deer kunye namathambo, ngokukhawuleza ukusika isikhumba. Ngomzimba, yenza izinto ezincinci, ezithanjiswa ngamanqatha, ityuwa kunye nepepper. Kwindawo yokutshisa i-pan ukutshisa i-fat and fry ucezu ukusuka kwicala lenyama. Phenduka ngamathambo, ufafaze iinqwelo kunye ne-anyanisi, ngaphambili uthathe iziqhekeza ezinkulu. Uze ubhaka ehovini ekushiseni kwama-225 degrees imizuzu engama-40, ngokukhawuleza uphulule ijusi edibeneyo. Kwisitya esahlukileyo, nciphisa umhluzi wenkukhu kunye nekhefu kunye nemizuzu elineshumi kude ulungele ukuthulula umxube ophekwe ngenyama. Uphelile inyama esuswe kwi-oven, uhlukanise inyama emathanjeni uze uthathe iinqununu malunga nobukhulu obu-3 cm. I-Sauce ishiywe emva kokutya inyama, ukuxinwa kunye nokukhonza kwitafile kwisitya esinye. Amapheya asemathinini angafakwa kwi-currant jam kwaye ahlobise ngenyama. Ukukhonza ii-chanterelles eziphekiweyo, ii-croquettes zamazambane okanye izihluma zaseBrussels.
Azu kusuka kwidla
ham (i-pulp) - 1 kg.
i-oyile yemifuno - 8 tbsp. l.,
anyanisi - ii-2 ii-pcs.
Thatha inyama yesidlwane esincinci, susa ifilimu kuyo, susa, uyinqumle ibe ngamaqhekeza amancinci malunga no-2 cm ubukhulu, uyilahle ngommese. Iityuwa, iipilisi, kunye negrisi kunye naluphi na utyiliso lweoli, ushiye ihafu yure. Gcoba i-oyile epanini yokucoca kunye ne-Teflon yembatho, yifake inyama kwindawo ephosayo kakuhle kwaye ukhawuleze uyiqhube kumacala amabini. Ngaphambi kokuba usebenze, ufafaze i-anyanisi ecocekileyo kwaye uthele kwi ketchup. Ncedisa ngeetatata ezisiweyo, ubunqunu okanye isonka somnyama.
Roe Deer Steaks
inyama ye-ham okanye i-spinal part - 1 kg.
amafutha - 120 gr.
ioli yemifino - 50 gr.,
ibhotela - 50 k.,
umgubo - 2 tsp,
amajikijolo omjunipha - 50 g.
ityuwa, ipepper ukula, iparsley.
Inyama ye ham okanye i-rump ye-roe deer ecacileyo yefilimu, ihlambulule kakuhle, uthathe izicucu zibe ngu-3 cm ubukhulu, unqandezeleke kancane, pepper, ityuwa, ufafaze i-oyile yemifuno. Beka omnye komnye kwisitya esinzulu, ukutshintsha i-anyanisi (ukusika iingcezu), imifino ye-parsley. Beka phantsi koxinzelelo kunye nendawo kwindawo ebandaleleyo iiyure ezingama-2.
Kwipeni yokucoca kunye neengubo zeTeflon, faka iinqununu zamafutha aqingqiweyo, ulungele kakuhle, ufune inyama elungiselelwe. Yilungele inyama ukuba ibeke isidlo esiphezulu, ukusuka phezulu ukuthululela i-sauce elungiselelwe.
Ngethuba uloba inyama, kufuneka upheke umsila.
Epeni kunye nejusi eseleyo emva kokubhaka, yongeza ½ indebe yamanzi, yongeza ibhotela, i-pinch yefulawa, ityuwa kwaye ubilise kakuhle. Kubalulekile: ioli kwiphaka yokutshiza kufuneka ishintshwe emva kokutya kwenyama yonke, ukuba oko kungenziwanga, i-sauce iya kutsha.
Ukulungiswa kulungelelaniswe ngamazambane adikiweyo, amafries aseFransi, irayisi ephekiweyo, isaladi yesaladi, isaladi ye-beet ne-horseradish.
inyama kwi-scapula, okanye i-ham - 1 kg.
ibhotela okanye igargarini - 100 grams,
i-fat gade - 100 g,
amajikijolo emijunipha - 2 ii-pcs.,
ipompi yomhlaba obomvu - 2 tsp,
umsila omnyama, i-cumin - ½ tsp,
yenkomo yenyama - ¼ st. l.,
Uhlaza - 1 tbsp. l.
Ukutya okucacileyo kweefilimu, uhlambulule kakuhle, uhlukaniswe namathambo, uthathe iinqununu ezinkulu, upheke kwi-cooker cooker, ngenxa yoko ubeka umxube wokupheka kwi-bhotela, u-anyanisi oqoshiwe, i-bacon e-fat, i-pripust. Yongeza i-cumin, ipompe ebomvu nebomnyama, i-anyanisi, inyama, ityuwa, udibanise kakuhle kunye gazinga imizuzu engama-7. Yongeza umhluzi wenkomo uze udilize imizuzu engama-20-30. UGoulash wakhonza ngeetayibisi ezifihliweyo, ii-croquettes zamazambane, irayisi ene-steam, isaladi yemifuno okanye i-compote.
Zrazy of dae deer
1-1,2 kg. inyama yenyama,
3-4st. iipuni zeoli,
100g yeetoni zeetoni,
1 ithispoon i-capers echotshoziweyo,
5 amajikijolo omjunipha,
3 iindidi ze-coriander,
1 tbsp. i-spoon yomgubo, ityuwa, ipepper,
Nciphisa i-rosewood ye-roe deer kwiifilimu, hlambulula kakuhle kwaye uthathe iinqununu 2 cm ububanzi kwaye ububanzi buka-5-7 cm. Kulohlu ngalunye ubeke enye ingxube ye-anyanisi, isiqwenga sekhukhamba, i-roll roll rolls. Ukuqinisekisa ukuba imiqulu ayifani, iya kufuneka iboshwe nge-thread, ilayini ngomgubo wesonka, ityelele ioli kwipu yokutshiza, ifudumele ngokufudumeleyo, iindawo zokufudumala kwi-pan yokucoca kunye ne-seam phantsi kunye nefry kumacala omabini.
Xa amajezi aqala ukuvela kwiimigca, kufuneka adibanise amajikijolo, i-capers, i-coriander, athulule amanzi ambalwa, uvale isiqhekeza uze udibanise uze ulungele, uhlambe amanzi rhoqo.
Ukulungiswa kungakhonzwa ngamazambane ezisiweyo okanye abilisiwe, ii-croquettes zepatata, isaladi yemifuno, irayisi ebilisiwe okanye i-compote.
I-Food yeWorld: recipes moussaka
Ukupheka zokupheka izitya
Ukutshisa kweNew 2018: zokupheka ezilula kwaye ezimnandi kunye nezithombe ezithatha ngeyanyathelo
Zucchini, zibhaka kwi-ovini, i-oven and fast-inyathelo-nge-nyathelo zokupheka kunye neefoto
I-cutlets yenkomo, iresiphi
I-Chocolate Brownie Cake - iresiphi yeklasi
Indlela yokubuyisela umntu?
Isibindi sesilwanyana kwisitayela saseStroanov
Candy "Ubisi lwe-Bird"
Ama-70 ngendlela entsha: ukuqokelelwa kwe-Loom Moscow S / S 2017
"Ukuzonwabisa kwekhofi" kwinkampani "Melitta"
Lasagne kunye nemifuno kunye noshizi
Imidlalo kwimibhedlele yothandekayo
Imfashini kunye nesibonakaliso kunye noMoscow
Indlela yokufundisa umntwana ukuba acele ibhokhwe
Izithambiso zokuzicoca zezoconti
Inkukhu ekhutshwe ngepilisi elimnandi
Yintoni umntu ayifunayo kumfazi
Izakhiwo zokwelapha ze-mulberry ezimhlophe
Owu, lomtshato, umtshato, umtshato ...